January 9, 2020 - khitalinmedia
ဆံပင် မကျွတ်တော့ပဲ ဆံပင်တွေသန်လာပြီး အကြောပြေစေတဲ့ ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်း
January 9, 2020 Khitalin Media 0
နေ့စဉ်အချိန်မှန် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်း ဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။ နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ … မနင်းခင် ခြေထောက်ကို.. ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါ..ခြောက်အောင်သုတ်ပါ…။ ဆား ၁ ပိဿာ (၂ပိဿာဆို ပိုကောင်း) ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ…။ နာရီဝက်လောက် ဆက်တိုက်နင်းရင်းနဲ့ ခြေထောက်က…ချွေးများ ထွက်လာတာ […]
ကလေးဘဝတုန်းက လုံလုံလောက်လောက် အချစ်မခံရသူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာ (7) မျိုး ..
အချစ်ခံရတယ်ဆိုတာ လုံခြုံနွေးထွေးတဲ့ ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းလာဖို့ အထောက်အကူကောင်းဖြစ်စေပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးဘဝမှာ အပြည့်အဝ အချစ်မခံခဲ့ရဘူးဆိုရင် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဒါတွေဖြစ်လာမှာပါနော် (၁) လူတွေကို အရမ်းအောက်ကျို့လွန်းတယ် ကိုယ့်ကြောင့် တစ်ဖက်သားအဆင်မပြေဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်နေတတ်ပြီး နေရာတိုင်းမှာအောက်ကျို့နေတတ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ လူတွေကိုကြောက်လို့၊ ဖားချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကို အမြင်စောင်းသွားမှာမလိုလားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) […]
အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် …မတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲသွားကြရင်ဝမ်းနည်းစရာ မလိုသလိုပြန်ပြီးလည်း မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံခဲ့ကြပြီးကံကုန်ရင် လမ်းခွဲကြရမယ် … ကံမကုန်သေးရင် ပြန်ဆုံတွေ့ဖြစ်ကြမယ်~~~ ဘဝရဲ့လှည့်ကွက်တွေအောက်မှာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းဖန်တီးလာပြီဆိုရင် ထင်မှတ်မထားတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဝေးကွာသွားကြရတာပါပဲ တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ ရေစက်ရှိလို့ ဆုံတာထက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဝဋ်ကြွေးဆပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ […]
“ဖုတ်” ၀င်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ….
ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မိမိရဲ့သွေးအမျိုးအစားအလိုက် သိကိုသိထားရမယ့် အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်….။ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အစားသင့်ဆုံအစားအစာများ A သွေး ငါး၊ ကြက်သား၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားပေးခြင်းဖြင့် အလျင်မြန်ဆုံးဝိတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပဲတောင့်ရှည်၊ စပ်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ ကော်ဖီကိုရှောင်ပေးပါ။ ရေများများသောက်ပေးပါ။ B သွေး နိုနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ သိုးသား၊ […]
ချစ်သူကောင်မလေးကို တကယ်ချစ်မှအောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ
ချစ်သူကောင်မလေးကို တကယ်ချစ်မှအောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ မအော်ပါနဲ့ ခံစားလွယ်တာမိန်းကလေးတွေပါ ချစ်သူတွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ် ဘာအကြောင်းရှိရှိ မအော်ပါနဲ့ စကားနဲ့ပဲပြောပါ သူတို့ပဲအော်ပါစေ လက်မပါနဲ့ မိဘတွေကတောင် မရိုက်ရက်တဲ့နုနယ်တဲ့မိန်းကလေးပါ ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ အော်တာတောင်လွန်လှပီ သူ့မိဘထက် မင်းကပိုကောင်းအောင်ထားနိုင်ရင်တောင် လက်ပါဖို့အခွင့်အရေးမရှိဖူး ( ခုတလောမိန်းကလေးတွေကပဲလက်ပါနေသလိုပဲ ) အလိုလိုက်ပါ. အလျှော့ပေးပါ. သည်းခံပါ သူမကိုအလျှော့ပေးတာက […]
သင်တို့၏ ရှယ်တစ်ချက်က သူတို့အတွက် ထမင်းတစ်နပ်စာ ဖြစ်နိုင်မှာပါ
သင်တို့၏ ရှယ်တစ်ချက်က သူတို့အတွက် ထမင်းတစ်နပ်စာ ဖြစ်နိုင်မှာပါ ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ “မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ ” အလှူလည်းလုပ်ချင်တယ် သိပ်ဝေးဝေးလဲမသွားချင်ဘူး တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေကိုမှာလည်း လှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လှည်းကူးမြို့နယ် မရမ်းချောင်းကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့​ မေတ္တာပရဟိတ မသန်စွမ်းအနာကြီးရောဂါသည် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာနဲ့ မရမ်းချောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံလေးမှာ လှူဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီဂေဟာလေးနဲ့ ဆေးရုံလေးက […]
ဒါရိုက်တာဏကြီး ရိုက်ကူးမယ့် “ချစ်ခင်စမှော်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် အေးမြဖြူ
ပရိသတ်တွေ အပတ်စဉ်စောင့်မျှော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲကြီးက မနေ့က Grand Final ပွဲ ကျင်းပပြီးတဲ့နောက် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုထဲကမှ အသက်အငယ်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်တဲ့ အေးမြဖြူကလည်း ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့သူတွေဟာ ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူး
Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့သူတွေဟာ ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူး သင်တကယ်လို့ Facebook သုံးလို့ ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါ ဒါတွေမလုပ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ (1) profile pic , cover pic တွေကို ခဏခဏ မပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး (2) ကိုယ်စာမပြန်ချင်တဲ့ သူတွေဆို ဝင်သာဝင်ကြည့်ပြီး တိတ်တိတ်လေး ပြန်ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ် […]
ယောင်းမဖြစ်သူရဲ့ ကာမသားကောင်အဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့ (၁၆)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးရဲ့ပြောပြချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ အမျိုးသမီးလေးများ လူကုန်ကူးရောင်းစားခံရပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်တွင် မတော်မတရား ပြုကျင့်နှိပ်စက်ခံရပုံ၊ ကလေးမွေးပေးရပုံများကို Human Rights Watch အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ဖော်ပြထားသည်။ အမည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ကချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် သူ့ယောင်းမလုပ်သူက တစ်ဘက်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးရောင်းစားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၆ နှစ်အရွယ် […]